इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रणबहादुर राई विजयी भएका छन्।
ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि बलात्कार र यौनशोषण भएको घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रदेश १ को एक मात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) की शिल्पा निराला कार्की विजयी भएका छन्।
धुलिखेलको मेयरमा पुनः व्याञ्जु धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ पुनः निर्वाचित भएका छन्।
राष्ट्रपतिले जेठ १० गते संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १० गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकी छन्।
चौथो टी-२० मा नेपाल १५ रनले विजयी युगान्डासँगको चौथो टी-२० खेलमा नेपाल १५ रनले विजयी भएको छ।
धनगढीमा ४३ हजार गन्दा स्वतन्त्रलाई साढे १९ हजार मत धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्।
जनकपुरधाममा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारकै अग्रता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता कायमै राखेका छन्।
हेटौंडामा साढे ६ हजार मत गन्न बाँकी, लामा २८ सयले अगाडि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा साढे ६ हजार मत गणना गर्न बाँकी छँदा मेयरकी उम्मेदवार मीना लामाले दुई हजार ८५३ मतको अग्रता लिएकी छन्।
ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि बलात्कार घटनालाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन गगन थापाको माग ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथिको बलात्कार घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माग गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीको गृहनगर दमकमा राप्रपाका थापा विजयी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकाको मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रामकुमार थापा विजयी भएका छन्।
बलात्कार विरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन (तस्वीर) ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहार गर्ने आयोजकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरिएको छ।
काभ्रेको बेथानचोकमा सत्ता गठबन्धन विजयी काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
यी हुन् स्थानीय सरकार हाँक्ने नेत्री
स्थानीय चुनाव हिमालखबर
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अहिलेसम्म १४ जना महिला पालिकाको मेयर/अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्।
काठमाडौंमा एक तिहाइ मतगणना, कसको कति?
काठमाडौं महानगरपालिकामा एक तिहाइ मतगणना सकिंदा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) ले ३८ प्रतिशत मत पाएका छन्।
भरतपुरमा साढे ५५ हजार मतगणना, कसको कति?
भरतपुर महानगरपालिकामा शुक्रबार बिहानसम्म ४४ प्रतिशत मतगणना सकिएको छ।
धरानमा हर्क साम्पाङ १५ सय मतले अगाडि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले फराकिलो मत सहित अग्रता लिएका छन्।
सप्तरीमा माओवादी केन्द्रको पहिलो जित सप्तरीको खडक नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जित हासिल गरेको छ।
कांग्रेसबाट ११७२४ निर्वाचित, कुन पदमा कुन पार्टीले कति जिते? स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसबाट ११ हजार ७२४ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
विजय जुलूसको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा १५ घाइते, दुई गम्भीर मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा विजय जुलूसमा निस्केको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएका छन् भने दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
देशभर २९ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित स्थानीय तहको चुनावबाट बिहीबारसम्म २९ हजार ३०३ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति वडा सदस्यमा पराजित नेपाली कांग्रेस दाङका जिल्ला उपसभापति गिरिराज सुवेदी वडा सदस्यमा पराजित भएका छन्।
वीरेन्द्रनगरको मेयरमा मोहनमाया निर्वाचित कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
भरतपुरमा एक तिहाइ मतगणना, कसको कति? चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा एक तिहाई मतगणना भएको छ।
विजयी घोषणा गरेपछि भेटियो सिलबन्दी मतपेटिका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरेपछि सिल नखोलिएको एउटा मतपेटिका भेटिएको छ।
रूखको हाँगाले लागेर सिंहदरबारमा एक कर्मचारीको मृत्यु सिंहदबारभित्र रूखको हाँगा खसेर एक सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ।
ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि सञ्चालकले नै बलात्कार गरेको आरोप ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीलाई सञ्चालकले नै बलात्कार र यौनशोषण गरेको पीडित युवतीले सार्वजनिक गरेकी छन्।
काठमाडौंमा ५८ हजार मतगणना, कसको कति? काठमाडौं महानगरपालिकामा झण्डै एक तिहाइ मत गणना हुँदा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) ले मतान्तर झन् बढाएका छन्।